Toekaren’i Madagasikara:MANOMBOKA MIARINA -
AccueilRaharaham-pirenenaToekaren’i Madagasikara:MANOMBOKA MIARINA
Rehefa mifaramparana tahaka izao ny taona dia efa miandrandra ny fiakaran’ny karama indray ny mpiasa amin’ny taona vaovao. Matetika dia io no hitsaran’ny olom-pirenena ivelany ny fitondrana misy eo hoe ohatrinona indray izao no ho fiakaran’ny karama satria ny vidim-piainana dia tsy mitsahatra ny miakatra ? Mora ny manome tsiny fa sarotra ny manarina, izany no azo ilazana ny fandehan’ny raharaham-pirenena eto amintsika. Raha nivoaka ny vola avy any amin’ny mpamatsy vola tamin’ny alalan’ny fikaonan-dohan’ny mpamatsy vola natao tany Parisy dia mieritreritra ny olona hoe hiakatra avo roa heny ny karama farafahakeliny. Tsy izay anefa no zava-misy satria ny fampiakarana karama indrindra fa ho an’ny mpiasam-panjakana dia miankina amin-javatra maro. Voalohany amin’ireny, dia tsy maintsy voasoratra ao anatin’ny tetibolam-panjakana ho avy ny taham-piakarana. Ny faharoa dia tsy maintsy mifanahatsahana amin’ny tsindrin’ny vidim-piainana ny fiakarany fa tsy afaka atao mihoatra an’izany satria misy amin’ireo mpamatsy vola tahaka ny tahirim-bola iraisam-pirenena no tsy manaiky mihitsy ny fampiakarana ho ambony loatra noho ny tsindrim-piainana ny fiakaran’ny karama. Izany hoe tsy afaka mivalampatra isika.
Efa miarina saingy…
Tamin’iny Fikaonan-doha tany Parisy iny izao dia efa azo sary an-tsaina sahady fa tsy hihoatra lavitra ny 7% ny fiakaran’ny karama. Ny antony dia nambaran’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena fa hoe efa manomboka miarina ny toekaren’i Madagasikara ary tokony ho nahatratra 4,1% ny tahan’ny harinkarena faobe tamin’ity taona ity ary tsy tokony hiakatra ambonin’ny 7% ny tsahan’ny tsindrim-piainana. Na izany aza dia nasesik’izy ireo ny tokony fanatsarana hatrany ny politikam-pitantanana fanarenana ny Jirama. Tsapan’izy ireo fa ny vokatry azo voalohany tamin’ny fifanarahana natao tamin’ny fahazoana ny Fec dia nahafapo azy ireo. Tsy mora ny fanarenana, efa averimberin’ny Filoham-pirenena hatrany izany saingy ny olona moa tonga dia te hanidina na dia mbola tsy ary elatra aza. Ny tiana ambara hoe na dia te hanaka-danitra hampiakatra karama amin’ny mahafinaritra sy mahafaly ny vahoaka aza ny fitondram-panjakana dia tsy afa-manoatra amin’ireo fepetra isan-karazany izay apetraky ny mpamatsy vola sasan-tsasany rahaka ny Fmi ohatra. Raha vao tsy manaraka ny ambaran’izy ireo dia misy tombontsoa ho an’i Madagasikara tapahany hafa indray any ambadika any. Ny antenaina moa dia hoe efa matotra ny mpitondra fa tsy atoro voanjo hadiana amin’izany ary olona nianatra sy manam-pahaizana amin’ny resaka fitantanana ihany koa ny Filoham-pirenena ka inona fa ho afaka ihoarana ihany izany ary hanao ny ezaka rehetra hanome ny farafahabetsany azo omena ny Fitondrana.